उपचार नपाएर वडाध्यक्षकै बहिनीको मृत्यु « Loktantrapost
उपचार नपाएर वडाध्यक्षकै बहिनीको मृत्यु
१९ चैत्र २०७६, बुधबार १४:४८
नरदेवी गुरुङलाई एम्बुलेन्सबाट अस्पतालतिर लैजाँदै गरेको अवस्था ।
मेचीनगर । प्रदेश १ कै सुविधासम्पन्न भनेर आफूलाई चिनाउने ठूला निजी अस्पतालको गम्भीर गल्तीका कारण पहाडी जिल्ला धनकुटाबाट उपचारका लागि ल्याइएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
विराटनगरका न्यूरो, विराट नर्सिङ होम समेतका ठूला अस्पतालले बिरामी लिन अस्वीकार गर्दै उपचार गर्न नमानेपछि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ५ लेगुवाकी ५२ वर्षीया नरदेवी गुरुङको मङ्गलबार मृत्यु भएको हो ।
उनी वडाअध्यक्ष शिवकुमार लिम्बू तुम्बाकी कान्छी बहिनी हुन् । छोरी लक्ष्मी गुरुङ (राई)का अनुसार बगैंचाको फूलमा पानी लगाउने क्रममा नरदेवी बिहान लगभग ६ः३० बजे ढलेर बेहोस बनेकी थिइन् । ‘स्थानीय क्लिनिकमा उपचारका क्रममा उच्च रक्तचापका कारण आमालाई समस्या भएको पत्ता लाग्यो,’ लक्ष्मीले भनिन्–‘क्लिनिकले यहाँ सम्भव नहुने भन्दै थप उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गरिदियो ।’
त्यसपछि एम्बुलेन्समा राखेर परिवारका सदस्यले लगभग १० बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान ल्याइपुर्याए । ‘चेकजाँचका क्रममा ज्वरो १०२ डिग्री देखियो ।
धरानमा उपचार सुरु गरेपछि चिकित्सकले आईसीयू खाली नभएको र बिरामीलाई तत्काल आईसीयूमा राख्नु पर्ने भन्दै विराटनगरको न्युरो अस्पताल रेफर गरिदिए,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘वीपीले बनाइदिएको सिफारिससहित बिरामी र्पुयाएपछि लगभग १२ बजेबाट न्युरोमा औषधि किन्न लगाउँदै नर्सहरुले उपचार सुरु गरेर डाक्टरलाई बोलाए । तर पछि डाक्टर आएर भेन्टिलेटर खाली नभएको र धेरै ज्वरो आएको बिरामी उपचार गर्न सकिँदैन भनेर निकालिदिए ।’ तर केही दिनयता न्युरोको भेन्टिलेटर खाली नै रहेको पाइएको छ ।
करिब १ बजे बिरामीलाई विराट नर्सिङ होम विराटनगर पुरयाइयो । अरु अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको बिरामीलाई हामीले किन उपचार गर्ने भन्दै कर्मचारी र चिकित्सकले तुच्छ व्यवहार देखाएको छोरी लक्ष्मीको गुनासो छ । ‘विराटमा सुरुमा बेडमा राखेर औषधि किन्न लगाए । उपचार पनि सुरु गरे,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘अरु अस्पतालको कागजपत्र हेरेपछि हामी पनि उपचार गर्दैनौं भन्दै निकालिदिए ।
त्यसपछि नोबेल शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो । परिवारका सदस्य र आफन्तले धेरै अनुनयविनय गरेपछि नोबेलले बिरामी लिएर उपचार सुरु र्गयो। उपचारकै क्रममा दिउँसो ३ः३० बजेतिर नरदेवीको मृत्यु भयो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बिरामी ल्याउन ढिला भएकाले बचाउन नसकिएको बताएको लक्ष्मीको भनाइ छ ।
‘डेढ घण्टा पहिले ल्याइपुर्याएको भए बचाउन सकिने थियो । ढिला भइसकेका कारण उपचार सम्भव भएन,’ नोबेलका चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उनले भनिन् ।
नरदेवीका दाजु तथा महालक्ष्मी नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष शिवकुमारले उपचारका लागि बिरामी लिनै नमान्ने अस्पतालको गैरजिम्मेवारीपना र लापरबाहीका कारण बहिनी गुमाउनु परेको गुनासो गरे । उनले बिरामीको उपचार गर्न भनी खोलिएका अस्पतालले नै गैरजिम्मेवार भई बिरामीलाई मारेको आरोप लगाए ।
महालक्ष्मी नगरका मेयर परशुराम नेपालले बिरामीको आकस्मिक उपचार गराउनु पर्ने अस्पतालले अमानवीयता प्रस्तुत गरेको बताए । ‘यो अमानवीय घटना हो, अरु पनि यस्ता थुप्रै घटना हुन सक्छन्’, नेपालले भने ।
सबै बिरामीलाई कोरोना सङ्क्रमित देख्ने अस्पतालको नजरले समस्या जटिल बनेको उनले बताए । यस्ता अस्पताललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको माग छ । आपतमा सर्वसाधारणलाई उपचार दिन नसक्ने अस्पताल बन्द गर्नु पर्ने भन्दै आक्रोस पोखे ।
न्युरो अस्पतालका डाइरेक्टर राजेश भट्टराई कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्न अस्वीकार नगरिएको दाबी गर्छन् ।
‘भेन्टिलेटर खाली नभएर वा अरु नै केही समस्या भएर बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सक असमर्थ भएको हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कोहीमा कोरोना सङ्क्रमण नै रहेछ भने पनि हामी उपचारमा पछि पर्दैनौं ।’
नागरिक अगुवा रामबाबु दाहाल कोरोना प्रभावको कारण देखाउँदै सामान्य ज्वरो आउने, रुघाखोकीका सामान्य बिरामीलाई त्यत्तिकै फर्काउँदा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनु गम्भीर गल्ती भएको बताए ।
‘कोही मान्छे कोरोना संक्रमित भए त्यही अनुसारको उपचार गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै खाले बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था आउनु भनेको दुःखद् हो ।’
कोशी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. रोशन खड्का उपचार गराउँदा चिकित्सकले पनि धेरै जोखिम बहन गरिरहनु परेको बताउछन् ।
पीपीई पनि उपलब्ध नभएको र विश्वभर कोरोना त्रास बढिरहेका कारण कोरोनाको लक्षण मिल्ने बिरामीको उपचारमा चिकित्सक हच्किने गरेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा गम्भीर बनेर राज्यले चिकित्सक र सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि उचित उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने डा. खड्काको सुझाव छ ।